Saturday September 15, 2018 - 12:46:21 in Wararka by Liibaan Jeexoow
sawir hore weerar alshabaab ka fuliyeen Lamu
Howlgalkan ayaa ka dhacay inta u dhexeysa deegaannada Sangaa’iloow iyo Ijaara oo ka tirsan gobolka Lamu ayaa lagu beegsaday gaari Bas ah oo ay la socdeen Rakaab ka soo baxay gobolka Lamu.
Ciidamada Al Shabaab ayaa Istaajiyey gaariga Baska ah ka dibnasoo dajiyey dhammaan dadkii saarnaa gaariga kadibna dadkii ukala soocay Muslimiinta iyo gaalo sida ay baahisay idaacadda Andalus ee Afka Xarakada ku hadasha.
Warbaahinnada dalka Kenya ayaa sidoo kale sheegay in dadka laga qaaday kaararkii aqoonsi ee ay wateen islamarkaana lagu sameeyey baaritaan socday in muddo ah iyadoona ugu dambeyntii halkaas lagu dilay dadkii Kirishtaanka ahaa.
"Saraakiisha Mujaahidiintu waxay noo sheegeen in laba ka mid ah Rakaabka ah ay noqdeen dad gaallo ah kuwaas oo durbadiiba goobta lagu khaarijiyey" sidaas waxaa baahiyay Radio Andalus.
Wararka ayaa intaas ku daraya in xoogaga Al Shabaab ay u muxaadareeyey dadkii Muslimiinta ahaa ee la socday gaariga ugu dambeyntiina la fasaxay oo safarkooda ay sii wateen.
Gaariga ayaa istaajiyeen Al Shabaab ayaa ka yimid gobolka Lamu kuna sii jeeday gobolka Garissa sida ay sheegeen warbaahinada dalka Kenya.
Xoogagga Jihaadiga ah ee ka howlgala gobolada Lamu iyo N.F.D ayaa waayadii dambe kordhiyey howlgalada abaabulan ee ay ku beegsadaan dadka kirishtaanka Kenyaanka ah ee ku nool deegaanadaasi.
Labadii todobaad ee ugu dambeeyey waxaa goboladaas ka dhacay qaraxyo iyo weeraro qorsheysan oo lagu laayey ciidamada melleteriga Kenya iyo qaar ka mid ah dadka Nasaarada ag ee lagu deegaameyey dhulkaasi.